बस्तीमा डोजर चल्दा वृद्ध बच्चाको बिजोक,डोजर लगाउने अध्यक्षलाई मध्यरातमा पत्रकारले सातो लिए (हेर्नुहोस भिडियो) - Complete Nepali News Portal
०२ असोज २०७७
बस्तीमा डोजर चल्दा वृद्ध बच्चाको बिजोक,डोजर लगाउने अध्यक्षलाई मध्यरातमा पत्रकारले सातो लिए (हेर्नुहोस भिडियो)
ScotNepal February 3, 2020
झापाको कमल गाउँपालिका वडा न: पाँचमा रहेको एउटा गाउँ नै डोजरले भत्काउन सुरु गरिएको छ । गाउँमा नै रुवाबासी मच्चिएको छ । करिब दस घर भत्काइ सकिएपछी अन्य एकसय चालीस घरपनि भत्काउने सुचना दिइएको छ भनेर स्थानियले जानकारी दिए ।
धेरै बर्ष अगाडी नै बसेको बस्ती अहिले आएर एकाएक उठाउन खोजिएपछी बालकदेखि वृद्धसम्मका आँसु थामिएका छैनन । रुदै दिनरात बितिरहेको ऊनीहरुको आफ्नो घरबार नै उठाउने भनेपछी कतै जाने ठाउँ नभएको बताउदै वृद्ध आमाबुबाले आँसु नै खसाले । स्थानीय सरकारलाई गुहार्न जादा पनि कसैले वस्ता नगरेको र वडा अध्यक्षले त झन त्यो बस्ती अनि बस्तिका कोहि पनि चिन्दिन भनेको ८० बर्सिय वृद्ध आमाले रुदै बताइन ।
आफ्नो दु:ख बताउदै उनिहरुले बर्सौ दुख गरेर बनाएको झुप्रो घरपनि भत्काएर आफुलाइ घरबारै बिहिन बनाउने योजनाको बिरोध गरेर आफुहरु घर भत्काउनु भन्दा अगाडी बाटोमै सुत्ने बताउदै डाको छाडे । कोहि गर्भवती महिला रहेको कोहि वृद्ध रहेको र जाने कतै ठाउँ नभएकाले कतै जाने केही खाने पनि ठेगाना नभएका कारण एक सय पचास घरको बिचल्ली नै भएको छ । कस्ले गर्दैछ यस्तो काम जसले यतिधेरै वृद्धदेखि बालबालिका डाको छाडेर रुन बाध्य छन ?
तलको भिडियोमा हेर्नुहोला बालक देखि वृद्धसम्मले डाको छाडेर यस्तोसम्म भनेको सुन्दा कस्को मन रुदैन होला!
हेर्नुहोस् असोज २ गतेको राशिफल :
महामारीमा पनि राेकिएन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकाे
शिल्पा पोखरेल र दुर्गेस थापा अभिनित
हास्य कलाकार देखि नेताको यस्तो क्यारीकेचर
सुमधुर स्वरकी धनि गायिका दिपा तामाङको
कुलमानको समर्थनमा गर्जिदा पुलिस आएपछि यसरि
कमला घिमिरेले बद्री पंगेनीलाई भेना भनेपछि,
श्रीमानको निधन भएपछि पाँच जना अपाङ्गता
शिल्पा पोखरेल र दुर्गेस थापा अभिनित ‘दिलको राजधानी ‘ सार्वजनिक
हास्य कलाकार देखि नेताको यस्तो क्यारीकेचर अचम्म (भिडियो हेर्नुहोस)
सुमधुर स्वरकी धनि गायिका दिपा तामाङको ‘नेपाल प्यारो छ’ बोलको...
कमला घिमिरेले बद्री पंगेनीलाई भेना भनेपछि, लाजले भुतुक्कै भए, हासैरै...
कलाकार शर्माले पढाइ दिने ढोरपाटन बाढीमा आफन्त गुमाएका दुई दिदीबहिनीलाई
टिकटकमा भाइरल भयो दुर्गेश थापाले खेलेको मार्मिक दशैं गीतमा(भिडियो)